समाज सेवालाई निरन्तरता दिईरहन्छु: पूजा बर्मा
प्रकाशित मिति : २०७५, २९ कार्तिक बिहीबार ०९:२७
सानो उमेरमा समाज सेवामा धेरै कमले गरेका हुन्छन्।त्यस्तै नेपालगन्जमा पनि सानै उमेर देखि समाज सेवामा अगाडी लागेकी नेपालगन्ज किशोरी सञ्जाल बाँकेकि सचिब पूजा बर्मा संग बागेश्वरीपोष्टले गरेको संछिप्त कुराकानी।
१:समाज सेवामा लाग्नुको मुख्य कारण के हो?
म पूजा बर्मा,म एउटा सानो मध्यम बर्गिय परिवारबाट रहेकी छु। मेरो बुवा नेपाल प्रहरी भएर पनि मलाई समाज सेवामा लाग्न मन लाग्यो। समाजमा धेरै प्रकारका गतिबिधिहरु रहेका छन्, जस्मा कति नकारात्मक छन् जो मलाई मन पर्दैन्। जस्तै वालबिवाह, दुर्ब्यबहार आदि जस्ता कुरा हटाउनका निम्ति पनि म समाज सेवामा लागेको हु। पहिला मलाई घरबाट वाल क्लब जानका लागि मेरो घरबाट समर्थन थिएन तर मेरो माईजुको हौसलाका कारण म यस तर्फ आबद्द् भएकी हु। अझ यसमा प्रबेश गरेपछि सबै साथीभाईको सहयोगका कारण यसमा रहिरहन मन लागेको हो।
२: किशोरी सञ्जाल भनेको के हो?
किशोरी सञ्जाल भनेको किशोरीहरुलाई पैरवी गर्न सिकाउने, आत्म बिश्वाश बढाउने, न्याय दिलाउने र हिंशामा परेकालाई सहयोग गर्ने गर्दछ।यो सञ्जाल २०७४ सालमा गठन भएको हो।
किशोरी सञ्जालले वलात्कार बिरूद्द न्याय दिलाउनका लागी रयाली, कोण सभा, दिप प्रज्वलन आदि कार्य गर्दछ। यस्तै वालवालीकालाई हिंशा,दुर्ब्यबहारबाट बच्नका लागी पैरबी समेत गर्न सिकाउदै आएको छ।
३: तपाई बेलाबेलामा सडक नाटकमा देखिनु हुन्छ नि!यसको मुख्य कारण के हो?
आम मानिसलाई वालविवाह सम्बन्धी सम्बन्धी न्याय,कानुन सिकाउने बारे हामी सडक नाटकको सहायताले बुझाउने गर्दछौ। मानिसहरुलाई वालविवाह, बलात्कार, दुर्ब्यबहार भएपछि पर्ने असरहरुको बारेमा जानकारी गराउदै जनचेतना दिलाउछौ। सडक नाटकले किशोरीहरुको आत्मबिश्वास बढाउँछ।त्यस्तै सडक नाटक आम जनमानसले राम्रो संग बुझ्ने भएको हुदा यो उपाय लिएर थुप्रै क्रियाकलापहरु देखाउछौ।
४: देशमा बलात्कार बढ्नुको मुख्य कारण के हो?
हाम्रो देश बहुजातिय, बहुधार्मिक र बहुभाषिक देश हो। यहाँ थुप्रै किसिमका मानिसहरु बस्ने गर्दछन्र र बढ्दो युगीकरणले लागु औषध, मादक पदार्थ सेवन बढाईरहेको छ।यो मादक पदार्थ सेवनले गर्दा बलात्कार बढ़ाउदै आएको छ।
धेरै जसो लागु औषध सेवनकर्ता आफूलाई होस्मा ल्याउन सक्दैनन् र महिलाहरु बलात्कृत हुने गरेका छन्।
५: भबिष्यमा के गर्ने बिचार छ?
हेरौ अहिले पढ्दै छु। पहिला पढाई पूरा गर्छु अनि आफु कुन बाटो तर्फ लाग्ने भन्ने कुराको निश्चित हुन्छ। तर मैले समाज सेवालाई भने निरन्तरता पनि दिईरहनेछु।